Pandaily – Everything about China's Innovation
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ၀ န်ထမ်း ခေါ်ယူ မှု ပလက်ဖောင်း သည် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပြုလုပ် ရေးနှင့် ပေါင်းစည်း ရေး သဘောတူညီချက်ကို စိုးရိမ် ခြင်းမရှိဘဲ လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့သည်
51Jobတရုတ္ ႏိုင္ငံက လူသား အရင္းအျမစ္ ေပါင္းစံု ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနတဲ့ Garnet Faith Limited ကုမၸဏီဟာ Garnet Faith Limited နဲ႔ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္း ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုး လိုက္ ၿပီလို႔ အဂၤါေန႔က ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။
၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် အီး ကော မတ် စ် တိုးတက် မည်ဟု စင်ကာပူ နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ Sea ကတိပြု
စင်ကာပူ ဂိမ်း နှင့် စားသုံးသူ အင်တာနက် ကုမ္ပဏီ Sea က ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် အိုင်တီ e-commerce ဝင်ငွေ သည်ဒေါ်လာ ၈. ၉ ဘီလီယံမှ ၉. ၁ ဘီလီယံ ကြား အထိမြင့်တက် လိမ့်မည်ဟု ဘဏ္ report ာရေး အစီရင်ခံစာတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
Top 1 realme Q5
Top2OPPO K10
Top3OPPO K10 Pro
Top4Honor 6T
Top5OnePlus Ace
Top6iQOO Neo6 SE
Top7vivo X80
Top 8 vivo X80 Pro
Xiaomi တည်ထောင်သူ အဖွဲ့ ၀ င်သည် Yitong Technology ၏ အထွေထွေမန်နေဂျာ ဖြစ်သည်
Yitong Technology က Sun Peng ကို အထွေထွေမန်နေဂျာ အဖြစ် ငှားရမ်း ထားကြောင်း အင်္ဂါနေ့က ကြေငြာခဲ့သည်။ Sun Peng သည် Microsoft Asia Engineering Academy တွင်အလုပ်လုပ် ခဲ့သည်XiaomiStartup အသင်း ။
Industry Mar 01 မတ် 1, 2022
D2C အိမ် နည်းပညာ အမှတ်တံဆိပ် Ban Rixian သည် Pre-A Round Financing ကိုရရှိ ခဲ့သည်
အိမ်တွင်း နည်းပညာ အမှတ်တံဆိပ် Ban Rixian သည် မကြာသေးမီက Source Capital ၊ K2VC နှင့် Vision Capital တို့ ဦး ဆောင်သော Pre-A ရန်ပုံငွေ သန်းပေါင်း များစွာကို မကြာသေးမီက ရရှိခဲ့သည်။
Startups Mar 01 မတ် 1, 2022
MediaTek မှ အဆင့်မြင့် စမတ်ဖုန်း များအတွက် Dimensity 8000 5G Chip Series မိတ်ဆက်
MediaTek ဟာ သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် System-on-Chip (SoCs) ကို အင်္ဂါနေ့က မိတ်ဆက် ပေးခဲ့ပြီး အရည်အသွေး မြင့်မား တဲ့ 5G စမတ်ဖုန်း တွေအတွက် flagship နည်းပညာကို ယူဆောင် လာ ခဲ့ပါတယ်။ လူ စာရင္းမွာ Dimensity 8100 နဲ႔ Dimensity 8000 တို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။
Aiqiyi သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ၉ ၆၈. ၁ သန်း အရှုံးပေါ် ခဲ့သည်
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ QiyiChina Video Platform သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်ကုန်ဆုံး သည့် စတုတ္ထ သုံးလပတ် နှင့် ဘဏ္ fiscal ာရေး နှစ်အတွက် စာရင်း မသ ွင်း ထားသော ဘဏ္ results ာရေး ရလဒ်များကို ကြေငြာခဲ့သည်။
Baidu: ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ ဝင်ငွ ေဒေါ်လာ ၁၉. ၅၄ ဘီလီယံ
တရုတ် အင်တာနက် ကုမ္ပဏီကြီးBaidu၂၀၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်ကုန်ဆုံး သည့် သုံးလပတ် နှင့် ဘဏ္ fiscal ာရေး နှစ်အတွက် စစ်ဆေး ခြင်းမရှိသော ဘဏ္ results ာရေး ရလဒ်များကို အင်္ဂါ နေ့တွင် ကြေငြာခဲ့သည်။
BYD Song MAX DM-i မော်ဒယ်ကို မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် စတင် ရောင်းချ မည်
Compact Utility Vehicle (MPV) အမ်ိဳးအစား ၂၀ ၂၂ BYD Song MAX DM-i ကို မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ တရားဝင္ မိတ္ဆက္ မယ္လို႔ ရွန္ ဇန္ အေျခစိုက္ ကား ကုမၸဏီ BYD က အဂၤါေန႔က ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။
Auto Mar 01 မတ် 1, 2022
ByteDance သည် ပထမဆုံး Music App Test ကိုစတင် ခဲ့သည်
ပေကျင်း နည်းပညာ ကုမ္ပဏီကြီး Bytedance မှ ပထမဆုံး ပြုလုပ်သော "Soda Music" ဂီတ အက် ပလီကေးရှင်း သည် ယခုအခါ အသေးစား စမ်းသပ်မှုများ စတင်ခဲ့သည်။
2022 MWC မှာ ဂုဏ်ထူးဆောင် Magic4 Professional က အလေ့အကျင့်
Honor က သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံး ထွက် flagship ဖုန်း ဖြစ်တဲ့ Magic4 Pro ကို မိတ်ဆက် ပေးလိုက် ပါပြီ။ Honor ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး ေပၚ ထိပ္တန္း စမတ္ဖုန္း ေတြကို အလ်င္အျမန္ ၿခံဳ ငံု
Event coverage Mar 01 မတ် 2, 2022
Quantum computing ကုမ္ပဏီ TuringQ သည် Pre-A + အလှည့်ကျ ငွေကြေး ကို ပြီးစီး သည်
ဖိုတွန် ကွမ်တမ် ကွန်ပျူတာ ကုမ္ပဏီ TuringQ သည် Pre-A + ရန်ပုံငွေ ၏တတိယ အကြိမ် ပြီးစီး ကြောင်း တနင်္လာနေ့တွင် ကြေငြာခဲ့သည်။
Qualcomm နှင့် Byterunout ပူးပေါင်း XR ပစ္စည်း ဂေဟစနစ်
အင်္ဂါနေ့ တွင် ယခုနှစ် ဘာစီလိုနာ တွင်ကျင်းပသော Mobile World Congress (MWC) တွင် Qualcomm သည် ဘေဂျင်း အခြေစိုက် Bytedance မိခင် ကုမ္ပဏီနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူညီချက် အသစ်ကို ကြေငြာခဲ့သည်။
Industry Mar 01 မတ် 2, 2022